Tiudze pamusoro pako
mubvunzo Tiudze pamusoro pako
2 makore 2 ago #7 by Dariussssss
Saka, kwaziwai vose. Ndinonzi Dhavhidhi uye ndiri itsva Forum Moderator. Ndakafunga kuti nzira yakanakisisa zvibayo-kure vamwe basa pano kuvhura nyaya iyi uye kusangana nemi mose.
Tiudze pamusoro pako, chii nokusingaperi unofunga kunokosha.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: rikoooo, PADA52, ricbru, txrace
2 makore 2 ago #14 by rikoooo
Welcome muna Rikoooo chikwata,
I'am Erik musiki uye maneja Rikoooo.com.
Ndiri kufara chaizvo kuti imi pano, ichi ndicho Forum yenyu. uri bhasi
Ndichashumirawo annouce yedu inotevera mugwaronhau kuudza munhu wose anenge Forum itsva iyi.
Happy ndege wose
2 makore 2 ago #15 by andhar
Hi, zita rangu riri Aan
Ini ndiri Airplane Zvokutopenga kubva Indonesia
Zvakanaka kukuonanai mose
2 makore 2 ago - 2 makore 2 ago #16 by Dariussssss
Ndinokutendai mose saka kure. Tariro kuona zvakawanda, zvakawanda mbiru uye zvakawanda basa pano munguva yemberi.
2 makore 2 ago #35 by FCAIR
Hello Zita rangu Kwose Terry (FCAIR) Ini ndiri pamudyandigere Akatombo Crew Chief. Zvanyanyisa kufarira FSX uye Sim dzichibhururuka pashure pemakore akawanda. Great nzvimbo itsva, anotyisa Downloads. Happy Flying vose
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: rikoooo, Gh0stRider203
2 makore 2 ago - 2 makore 2 ago #36 by viscount
Hi - Ndiri John kubva kumaodzanyemba echitsuwa UK. Zvino pamudyandigere, rangu rokutanga ndege Simulator raiiswa pamusoro ZX81, vakaremerwa nokuda patepi, uye raiva B737 (tsime racho altimeter uye but) anomiririrwa blocky chaizvo Graphics ichibhururuka pakati nechigumbuso A uye misa B nhema uye chena - uye kana iwe akaita zvakanaka iwe akaona "girl", mumwe blob dema anonzi C. Inspiring penhumbi. Kubvira ipapo wandakamboda ose Flightsim kuti Microsoft kuti zvivepo, mberi kuburikidza siyana makombiyuta kubva 8086 kuburikidza 384, 486, Pentium, uye ndinoiitawo mashomanana, kwangu I7 ano. Ndine rezinesi voga ndine vaviri maawa zana pane 152s uye PA28s pamusoro - vasisiri kuitika nokuda mutengo ndege muno muUK. mwanakomana wangu akashandisawo Flightsims, akanzwisisa Tsikidzi uye vakadzidza kubhururuka, uye zvino 4000 maawa pasi bhandi rake (chaihwo) A319 / 320s kunongova kuda kuenda nokuda tikiti wake Captain. Yaivamo Rickoooo nokuda freeware Canary Islands girl riri anoyevedza chaizvo - saka ngaaongwe akawanda kuti. Great kuona peji Chirungu sezvo pasinei kurarama kubva France hapana anopfuura 50 makiromita kunzwisisa kwangu mutauro wavo uri kure nezvakanaka.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: rikoooo, alogie
2 makore 2 ago #37 by rikoooo
Hello FCAIR uye viscount,
Ndinokutendai nokuti mharidzo yako uye kugamuchira kuti Forum itsva, tiri kwazvo nechido uye kufara kuva newe pano, usazeza kuposita nyaya itsva uye kukumbira rubatsiro munharaunda. zvakare, kana uchida kubatsira vamwe zvingava zvikuru, ruzivo rwako kwazvo welcome pano, uye tingadai kuda kuva vamwe sei kuti, zvinobhururuka zvidzidzo, Tutorials uye zvichingodaro vaiswa iri mudare. mupiro ose achaita kuti nharaunda afare.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: viscount, FCAIR
2 makore 2 ago #39 by FCAIR
Panguva iyi ndakafanana zvikuru mudzidzi sezvo ini ndamboita. Zvinogona kutora ini zvishoma kuti awane zvose vazukuru uye outs pamusoro FSX asi chero nguva ndinogona kubatsira munhu Ichava mufaro mukuru kwandiri kuita kudaro.
Blue Nendege vose ..
2 makore 2 ago #44 by Dariussssss
Zvakare, Welcome to Rikooo.
2 makore mwedzi 1 apfuura #153 by PAYSON
Musonza vake, rangu nechidzitiro zita zita riri PAYSON. Ndanga kushandisa kombiyuta simulators kwenguva yakati zvino, chaiko kuti akashandisa kopi Ubisoft kuti Sturmovik IL2. Akanzwa kuti 10 makore WarBirds (chaizvoizvo dzakavabatsira aine nzvimbo yemutekenyi ane murwi wavaida kuzozivisa vari mumutambo. Neniwo kusakara dzimwe peripherals kuridza Ubisoft zviwedzere yepamusoro kurwa Sims. Ndakatamira kuti anenge 5 makore Nyika Motokari dzehondo, vachiri kutamba nayo. (anowana zvinodhura) ndakaona kushandiswa FSX inenge 8 kana 9 kwemakore uye kudanana pamanyorerwo awo. ndichiri kubatanidzwa pamwe WoT uye achiri kupfura-in-kumusoro Ubisoft. Zvino kuti ndakawana kubva pamusoro imi vabereki, zviri zvikuru kuva hombe vakasarudzwa ndege kubhururuka.
Time chokusika peji: 0.245 mumasekonzi